Diiwaan-galinta musharixiinta xilka madaxweynaha oo maanta bilaabaneysa |
Diiwaan-galinta musharixiinta xilka madaxweynaha oo maanta bilaabaneysa
Diiwaangalinta musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay maanta ka bilaabato xarunta Villa Hargeysa sida ay sheegeen gudiga qabanqaabada doorashada.
Diiwaangalinta ayaa lagu wadaa in ay socto mudo saddex cisho ah, waxaana ay ku egtahay maalinta Axad ah todobaadka danbe oo la soo afjarayo is diiwaanglinta musharixiinta xilka madaxweynaha.
Guddoomiyaha gudiga doorashada madaxweynaha C/raxmaan Ducaale Beylle ayaa warbaahinta u sheegay in jadwalka sida uu u qoran yahay wax walba ku soo dhamaan doonaan, isaga oo meesha ka saaray dib u dhac kale oo ku iman kara doorashada madaxweynaha.
‘’Jadwalka waad aragtaan sidan ayeey wax noogu socon doonaan, waxaan rajeyneynaa 8da bisha Feberaayo oo ku beegan maalin Arbaco ah in dalku yeesho madaxweynaha cusub oo hogaamin doona afarta sano ee socto’’ ayuu yiri guddoomiyaha gudiga doorashada.
Arinta ku cusub jawalka doorashada dadkuna sida weyn u xiisaneynaan ayaa waxaa ka mid ah dooda dhaxmari doonta musharixiinta madaxweynaha oo si wada jir ah isku soo hor fariisan doona, waana markii ugu horeysay oo Soomaaliya sidan oo kale dood loo qabto musharixiinta madaxweyne dadkuna su’aalo weydiiyaan.
Ugu danbeyntii, inkastoo ilaa iyo hadda musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha kor u sii dhaafayaan 20 musharax ayaa la filayaa in maalinta Axad ah marka la shaaciyo liiska musharixiinta is diiwaan-galisaytiradu intaa ka yaraan doonto madaama laga yaabo in musharixiin dhowr ahna tartanka isaga harin doonaan.